DOWNLOAD Theme Rikoooo Windows 98 + Janoary 2012 - Rikoooo
Theme Rikoooo Windows 98 + Janoary 2012
Fa X-Plane 9.50 +
Fa ny teme mifanaraka amin'ny Windows 7 kitiho eto
Ny foto-kevitra ianao dia hahita foto-kevitra tanteraka. Tsy mifanaraka amin'ny Windows 98, 2000, XP sy Vista 32bit sy 64bit. Misy ny tsary ny sary avy any Flight simulator sy ny tena sary monina fiaramanidina mandeha ao amin'ny tanteraka mba sendra 20 isaky ny minitra.
Foto-kevitra io ihany koa ny miova ny feo ho an'ny startup sy ny fanakatonana ny Windows. Ho afaka nanokatra Windows mandre ny mamy feon'ny fiaramanidina iray mandalo amin'ny hafainganam-pandeha avo sy fanakatonana ny feon'ny fiaramanidina fipetrahana. Koa fa rehefa entana ao fako, dia hihaino ny feon'ny lozam-piaramanidina.
Ny foto-kevitra ihany koa hanova ny biraonao sary masina, ny fako foana sy ny fako feno, ny mpampiasa fampirimana, ny tambajotra kisary, ary hanolo azy tamin'ny sary masina eo amin'ny foto-kevitra ny fiaramanidina. Ny kaonty sary Azo soloina amin'ny alalan'ny sary, naka ny endriky ny Rikoooo (tsy voatery).
Azonao atao ihany koa ny manampy fanao screensaver (tsy voatery), izay misy ny tsary efijery izay tsy manana vato ho an'ny Theme.
Ary rehefa afaka izany, tianao kokoa? Tsara izany azo atao, satria dia azonao ovaina ny Windows logon lamba (tsy voatery) nofidian'ny ny Top Screen ao amin'ny Fifaninanana.
Azonao atao koa ny manolo ny FSX Splash Screen (mozika startup FSX) nofantenana teo amin'ny efijery nandritra ny fifaninanana. (Tsy voatery)
Ary farany, dia afaka ihany koa (optionally) hanoloana ny totozy kitondro tsy ny an'ny fiaramanidina animation!
Misaotra anareo rehetra ny mpandray anjara ny Theme: Absolam, Airlink AirOnAir, Backdoorman, Gabgreg, HarmonyHeaven, Jb2512, Jejetoulouse, Jojo-ny-jiolahy Parisfp, Razgriz 1991, Smurf, Theluc
Theme Rikoooo Windows 7 Desambra 2011
Ny fitaovana famerenana manamboatra vokatra FSX & P3D & FS9 2.3
Theme Rikoooo Windows 98-2000-XP-Vista - Desambra 2011
Official Theme Rikoooo Jolay - Windows 7